စစ်တွေမြို့ကို မီးရှို့ရန်ကြံစည်သူများကို ထပ်မံဖမ်းမိ ~ Myanmar Express
စစ်တွေမြို့ကို မီးရှို့ရန်ကြံစည်သူများကို ထပ်မံဖမ်းမိ
From : စောမြင့်သန်း (ပေါက်တော) စစ်တွေဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းက မီးရှိုဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားနေသည့် မူစလင်များကို စစ်တွေမြို့ နှစ်နေရာတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် တစ်နေရာတွင် အဝတ်စများ ထိုးထည့်ထားသည့် ဓာတ်ဆီပုလင်း ၂၅ ပုလင်းနှင့် ထပ်မံ ပြင်ဆင်မည့် ပုလင်းခွံ ၃၄ လုံး ဓား၊ ဓားမြောင် ၊ ဆူးချွန် ၊ သစ်သားအရိုးတပ်သည့် လှံ ၊ သံချွန်များ ၊ သံတူရွင်းများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ "ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုန်တန်း ရပ်ကွက်မှာ ၂၃ ဦး ၊ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့တယ် နောက်ထပ် မီးရှို့ဖို့ ကြံစည်တဲ့ သူတွေ ထွက်ရှိလာ တဲ့ အတွက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အခါမှာ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် ဖမ်းဆီးရမိ တဲ့သူ ၂၉ ဦး ကို စစ်တွေမြို့ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းသို့ အပ်နှံပြီး ကျင့်၁၅၁ အရ ချုပ်နှောင်ထားရှိပြီး အရေး ယူုဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေပါတယ် " ဟု နယ်စပ်ဒေသနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်း က ပြောကြားသည်။ ယင်းနှင့်အတူ စစ်တွေ မြို့ပေါ်ရှိ အအေးခန်းတစ်ခုမှလည်း မူစလင် ၁၂ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့ရာ အအေးခန်း ပိုင်ရှင်အား ဖမ်းဆီးရမိထား သည့် သူများနှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းရာ အအေးခန်းပိုင်ရှင်က သူ၏ အလုပ်သမားများ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ယင်း ၁၂ ဦးကို လည်း ထပ်မံဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Myanmar Express
15 June 2012 15:33
Hi, friends! I have found Myanmar news on FFI. check itမြန်မာညီအစ်ကိုများ ကွန်မန့် လေးတွေ ကူညီရေးသားကြပါအုန်းhttp://www.faithfreedom.org/features/news/muslims-riots-in-burma-leaves-a-trail-of-death-and-devastation/
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်အတွင်း လူသတ်၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ကျူးလွန်သူ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ၁၀၀၀ ကျော်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ...